Programan'ny 11 Nights
Ny fiara maraina mankany Haridwar avy any Delhi via Meerut sy Roorkee. Rehefa tonga ny fotoana, dia jereo ny hotely. Tatỳ aoriana, nitsidika an'i Har Ki Pauri nanampy an'i Aarti Darshan ny hariva. Avy eo dia mialà amin'ny alàlan'ny trano fialantsasatra amin'ny alina.
DAY 02: HARIDWAR - BARKOT (215 KMS / 5 - 6 HRS)
Mijanòna sakafo maraina, mandehana mankany Barkot amin'ny alàlan'i Dehradun sy Mussoorie. Mandeha an-tongotra, mankafy sakafo antoandro ao Mussoorie ary manohy ny dia. Ho tonga any Barkot ianao amin'ny hariva, rehefa tonga ny fahatongavanao dia midira amin'ny tranokala switzerland manana trano fialantsasatra.
DAY 03: BARKOT - YAMUNOTRI - BARKOT 42 KMS DRIVE / 6 KMS TREK.
Ny marainan'ny misasak'alina maraina, mialà sasatra 42 kms mankany Janki Chatti. Rehefa tonga ny fahatongavanao dia manomboka ny km 6 kms mankany Yamunotri. Rehefa tafaverina dia tsidiho ny tempolin'i Yamunotri ho darshan; afantohy ny tananao ary miankohofa eo anoloan'ilay Yamuna andriamani-bavy, ary raiso ny fitahiany ho an'ny fivahiniana masina. Rehefa avy nandoa hajaina, dia niverina tany amin'i Janki Chatti ny hariva. Avy eto dia hitondra anao any Barkot ny mpamily antsika, any no hahafahanao miala sasatra any amin'ny toby.
DAY 04: BARKOT - UTTARKASHI (DRIVE 82 KMS, 04 HRS)
Manomboha ny maraina miaraka amin'ny lalana 82 ho any Uttarakashi. Eo amin'ny fitsidihana ny Prakateshwar Cave, vatohara voajanahary voajanahary izay malaza amin'ny fananana endrika mitovy amin'ny Shivling masina. Rehefa tonga tany Uttarakashi dia midira amin'ny hotely. Ny hariva dia mitsidiha ny Tempolin'i Vishwanath ary miverimberina miverina any amin'ny trano fandraisam-bahiny mandritra ny alina. Uttarakashi: Miorina eo amoron'ny reniranon'i Bhagirathi izy ary nomena toerana masina maro. Miantso vitsivitsy-Vishwanath, Ekadash Rudra, Bhairav, Gyaneshwar ary Tempolin'i Kuteti Devi.
DAY 05: UTTARKASHI - GANGOTRI - UTTARKASHI (100 KM ONE SIDE)
Alefaso any Gangotri vao maraina. Rehefa tapitra ny fotoana, dia makà toerana masina ao amin'ny rano masina avy amin'ny renirano Masina any Ganges, (fantatra koa amin'ny hoe Bhagirathi). Ataovy ny fombafomba mifandraika amin'izany ary manangona ao amin'ny manodidina ny toerana. Ny tolakandro dia mandeha any Uttarakashi ary hijery ny hotely rehefa tonga.
Rehefa avy misakafo maraina iray, mitondra fiara mankany Guptkashi. Misy sakafo antoandro efa tara-paharetana any Molgarh / Tilwara / Ghansali. Etsy ankilany, jereo ny tanàna lovan'ny Tehri miakatra tsikelikely ao anaty rano matanjaka ao amin'ny reniranon'i Holy Ganges noho ny fanorenana ny tohodrano Tehri. Manaova fialan-tsasatra mandritra ny sakafo ary manohy ny dianao miaraka amin'ny fomba fijery mahafinaritra ny renirano mahafinaritra Mandakini. Ho tonga any Guptkashi ianao amin'ny hariva. Rehefa tonga ny fahatongavana dia midira amin'ny hotely iray ary miala sasatra amin'ny alina.
DAY 07: GUPTAKASHI - KEDARNATH (32 KMS DRIVE, 14 KMS TREK)
Ny fiara maraina mankany Gaurikund (32 kms amin'ny lafiny iray). Rehefa tonga ianao dia tsy maintsy mandeha amin'ny lalana zigzag. Ny fandehanana any an-tsekoly dia voalahatra ao Rambara. Manohy ny fitsangatsanganana mankany amin'ny Tempolin'i Kedarnath. Rehefa tonga ny fotoana, jereo ny hotely na bungalow mpizahatany. Mankanesa ary mitsidika ny Tempolin'i Kedarnath. Manaova hajia amin'ny fitoerana masin'ny Masina ary avy eo mitsidika ny Adi Shankaracharya Samadhi, izay ao ambadiky ny tempoly. Miverena any amin'ny hotely mandritra ny alina.
Mankanesa any Gaurikund ny maraina, ary amin'ny fahatongavanao mankany Pipalkoti. Amin'ny hariva ianao dia hijery any amin'ny hotely any Pipalkoti. Mialà sasatra ary mankanesa any amin'ny trano fandraisam-bahiny.
DAY 09: PIPALKOTI - BADRINATH (72 KMS)
Mandritra ny maraina, mandroa sakafo maraina, mitondra fiara mankany Shri Badrinath Ji. Misy tempoly samihafa izay hianjera eny an-dalana, toy ny Tempolin'i Narsingh sy Adi Shankaracharya Samadhi. Tsidiho ireo fitoerana masina ireo mba hahazoana fiadanan-tsaina ary manohy ilay dia mankany Badrinath. Rehefa tonga ny fotoana, midira amin'ny hotely. Aorian'izay dia manaova sipa masina ao amin'ny Tapt Kund, arahin'ny fitsidihana ny tempoly lehibe. Amin'ny faran'ny tolakandro, mitsidika ny Mana Village, tanàna farany teo anoloan'ny sisintany Tibetana, Bheem Pul, Byas Cave & Ganesha Cave. Miverena any Badrinath ary amin'ny takariva dia afaka mitsidika ny toerana masina ho an'i Aarti Darshan ianao. Rehefa afaka kelikely, dia miala sasatra amin'ny hotely.
Raha te-hahita ny fandroana masin'ny Sri Badrinath ianao dia mifohaza amin'ny maraina 03: 30 am ary mankafy ny mijery tsara. Rehefa vita ny sakafo maraina mankany Rudraprayag amin'ny alàlan'ny Joshimath, Chamoli, Nanda Prayag ary Karna Prayag. Rehefa tonga ny fotoana, midira amin'ny hotely iray ary manàna fialantsasatra amin'ny alina.
Ny fiara maraina mankany Rishikesh amin'ny alàlan'ny Srinagar sy Devprayag. Devprayag no fitambaran'ireo renirano masina Alaknanda sy Bhagirathi; Taorian'ny fihaonana tamin'ity toerana ity, ireo vondrona roa masina masina ireo dia miray hina mba hamorona ny Ganges. Rehefa tonga tany Rishikesh, dia jereo ny hotely. Nitsidika ny Laxman Jhula tatỳ aoriana, ary nijanona tao amin'ny hotely ny alina.
Ny maraina aorian'ny sakafo maraina dia miverena any Delhi. Tonga any Delhi ny faran'ny tolakandro. Mitohy ny Tour sy ny Services.